Abantu bangakhuluma abakuthandayo - Benni | News24
Johannesburg - Umqeqeshi weCape Town City uBenni McCarthy uthi abanye abaqeqeshi kwi-PSL banezizathu eziningi zokwesabela imisebenzi yabo kunaye.
ICity yehlele endaweni yesikhombisa kwilogi kulandela ukwehlulwa kwayo yiMamelodi Sundowns, iKaizer Chiefs, iBidvest Wits neBaroka FC imidlalo ilandelana.
Ukungenzi kahle kwabo kuza nengcindezi kodwa uMcCarthy uyakungabaza ukuthi umsebenzi wakhe usengcupheni njengoba sekubhekwe emaphethelweni esizini.
Nakuba kubukeka ingasekho embangweni wesicoco seligi iCitizens njengoba ilandela iSundowns ngamaphuzu angu-9 sekusele imidlalo engu-8, ezikaMcCarthy zisenalo ithuba lokuthatha isicoco seNedbank Cup.
OLUNYE UDABA: OwePirates uthi akayikhulumi kubadlali eyokuthatha eseligi
"Abantu bangakhuluma abakuthandayo, abangilethele noma yimuphi omunye umqeqeshi othe eqala ukuqeqesha, wenza izinto esengizenzile,” kusho uMcCarthy ngemuva kokwehlulwa ngo-2-0 yiBakgaga ePeter Mokaba Stadium maphakathi nesonto.
"Ngakho, hhayi ngoba ngibeka izaba, bakhona nabanye abaqeqeshi abafana noFadlu Davids [weMaritzburg United ] owenza kahle impela, kodwa akaqali ukuqeqesha. Mina ngiyaqala, kodwa ngikwi-top 8. Angikaze ngehlele ngezansi kwayo."
EzikaMcCarthy namhlanje ebusuku zizobhekana neChippa United eCape Town Stadium ngo-20:00.